सावधान ! राति निन्द्रा नलाग्नुको एउटा कारण यस्तो पनि हुनसक्छ « Lokpath
२०७६, ३ चैत्र सोमबार २२:००
प्रकाशित मिति : २०७६, ३ चैत्र सोमबार २२:००
काठमाडौं – के तपाईंलाई राति अबेरसम्म निन्द्रा लाग्दैन ? त्यसो हो भने सावधान ! यो एउटा रोग बनिसकेको पनि हुनसक्छ ।
तपाईंले यो समस्या समाधानको लागि चिकित्सकसँग परामर्श लिन जरुरी छ । तर एक अनुसन्धानले यो पनि देखाएको छ कि, ”अबेरसम्म मोबाईल फोन र विद्युतिय उपकरणमा बिताउने बानीले तपाईको निन्द्रा हराम गरेको हुनसक्छ ।”
नयाँ डिजिटलको उत्पादन र सेवाहरूको विकास तीव्र गतिमा भएसँगै सबैको पहुँचमा पुगेको छ, मोबाइल, ल्यापटप, ट्याब्लेट र अरु विद्युतिय उपकरणहरु ।
फोसबुक चलाउन , अरु सामाजिक सञ्जाल चलाउन, भिडियो बनाउन वा च्याट गर्न, फोटो खिच्न, गेम्स खेल्न, इन्टरनेटको प्रयोग, भिडियो हेर्न मोबाइल प्रयोग गर्दा अबेरसम्म तपाईको हातमै रहन्छ मोबाईल ।
औसतमा एक मानिसले मोबाइलमा च्याट गरेर, भिडियो हेरेर, इन्टरनेटको प्रयोग गरेर आफ्नो दिनको १६ घण्टासम्म बिताउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
मोबाईलको प्रविधीले विश्व दुनियाँ आफ्नो हातमा छ भने कति शक्तिशाली विकीरणहरु छन् होला ? के हामीले यो कल्पना गरेका छौँ ? त्यसैले यी यस्ता विकीरणहरुबाट धेरै समय नजिक परिरहन हुँदैन । यसले मानिसको मस्तिष्कलाई र शरीरलाई हानीसमेत पुर्‍याइरहेका हुन्छौं ।
घाँटी दुख्ने, पाखुरा दुख्ने, एकोहोरो हुने, दिमागले अरु कुरा सोच्न नसक्ने, झ्याउ लागेको जस्तो हुने , महत्वपूर्ण काममा असर, खानपानमा असर, र शरीरको थकानले गर्दा विभिन्न रोग निम्तिन सक्ने ति अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
आँखा दुख्ने, टाउनको भारी हुने, अबेरसम्म निन्द्रा नआउने, फोन नै चलाइरहन मन लाग्ने, टाउको दुख्ने, ढाड दुख्ने, जोर्नी दुख्ने, मानसिक थकान, डिप्रेसन, आत्महत्या, क्रोध, हिंसा गर्ने मनस्थिति तथा अन्य धेरै रोगहरू यी यस्ता प्रविधीजडित उपकरणको प्रयोगले हुने गर्छ ।
उक्त अनुसन्धानले देखाएको छ कि, ‘धेरै स्क्रिनमा समय बिताउने गर्दा निन्द्रामा समस्या आएर अनुहारमा डण्डीफोर, दाग, आँखा मुनि कालो घेरा, छालामा समस्या थायराइडको समस्या, केश झर्ने, मुटु रोग, मृगौलाको समस्या, उच्च रक्तचाप, मोटोपन, पेटसम्बन्धी विभिन्न रोगहरु देखा पर्न थाल्छ ।’
त्यतिमात्रै होईन तपाई कति घण्टा सुत्नुहुन्छ ? मानिसको उमेर, शारीरिक अवस्था, मानसिक स्थिती अनुसार निन्द्रा तलमाथी हुनसक्छ । तर विशेषज्ञले उमेअनुसारको तपाईलाई आवश्यक पर्ने निन्द्राको समय दिएका छन् । तपाईको उमेरअनुसारको निन्द्रा हुनुपर्ने समय हेर्नुहोस् ।
नवजात (०–३ महिना) :
भर्खर जन्मेका बच्चाहरुले सामान्यतया दैनिक १४ देखि १७ भण्टा सुत्नुपर्छ । ११ देखि १३ घण्टा सुत्दा पनि तिनीहरुलाई निन्द्रा पुग्छ, तर १९ घण्टाभन्दा बढि सुत्न दिनु हुँदैन ।
शिशु (४–११ महिना) :
यिनीहरुका लागि उपयुक्त १२ देखि १५ घण्टाको निन्द्रा हो । कम्तीमा १० घण्टासुत्दा पनि निन्द्रा पुग्छ, तर शिशुहरुलाई १८ घण्टाभन्दा बढि कहिल्यै सुत्न दिनु हुँदैन ।
वामे सर्नेहरु (१–२ वर्ष) :
यो उमेरका बच्चाहरुले ११ देखि १४ घण्टा सुत्नुपर्छ । यिनीहरु कम्तीमा ९ देखि १५ घण्टाको निन्द्रा हो ।
विद्यालय जानु अघिका (३–५ वर्ष) :
विशेषज्ञहरुले यो उमेर समूहका बच्चाहरुले १० देखि १३ घण्टा सुत्नुपर्ने बताएका छन् । तर, ८ घण्टाभन्दा कम र १४ घण्टाभन्दा बढि निन्द्रा यिनीहरुलाई उपयुक्त हुँदैन ।
स्कुले उमेरका (६–१३ वर्ष) :
यो उमेरकाहरुले ९ देखि ११ घण्टा सुत्नुपर्छ । ७ घण्टाभन्दा कम र १२ घण्टाभन्दा बढिको निन्द्रा यिनीहरुका लागि स्वस्थ मानिएको छैन ।
किशोरकिशोरी (१४–१७ वर्ष) :
किशोरकिशोरीका लागि सुझाएको निन्द्राको अवधि ८ देखि १० घण्टा हो । तर यिनीहरुले ११ घण्टाभन्दा बढि र ७ घण्ठाभन्दा कम सुत्नु उपयुक्त नहुने जनाएको छ ।
युवा (१८–२५ वर्ष) :
युवा उमेर समूहकाहरुले ७ देखि ९ घण्टा सुत्नु उपयुक्त हो । यिनीहरुले ६ घण्टाभन्दा कम र ११ घण्टाभन्दा बढि सुत्नु हुँदैन ।
वयस्क (२६–६४ वर्ष) :
यो उमेरका समूहका लागि सुझाएको निन्द्राको अवधि युवाहरुको लागि जस्तै हो । ७ देखि ९ घण्टा सुत्नु ।
वृद्व (६५ वर्ष भन्दामाथि) :
यो उमेर समूहका मानिसहरुका लागि दैनिक ७/८ घण्टाको निन्द्रा स्वस्थ मानिएको छ । तर यिनीहरुले ५ घण्टाभन्दा कम र ९ ९ घण्टाभन्दा बढि सुत्नु हुन्न ।
वाकरले भनेका छन्, पछिल्लो समयका मानिसहरु प्रविधीमा हिमचिम बढाएर आफ्नो निन्द्रा साटिरहेका छन् । तर यसको दिर्घकालीन असर डरलाग्दो छ । मानिसहरुमा निद्रा नपुग्दा शारीरिक धेरै प्रकिया अवरुद्ध हुन्छन् र हृदयरोग, क्यान्सर र मधुमेहको जोखिम बढ्छ। दैनिक सातदेखि नौ घण्टा सुत्दा पर्याप्त निद्रा पुग्छ। तपाईलाई थाहा छ रु पर्याप्त सुत्नु शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यका लागि मात्रै होइन सृर्जनशीलताका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। निन्द्रा नलाग्ने मानिसले के गर्ने रु प्राकृतिक निन्द्राको लागि तपाईले केहि टेक्निक फलो गर्नुपर्छ । जुन विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ ।
रातमा निन्द्रा परेन भने यी उपाय पनि फलो गरीहेर्नुहोस् :
तपाईं सेवन गरेको औषधी?
– तपाईको औषधी सेवन गर्ने सेड्युल छ भने पनि समस्या आउन सक्छ ।
महिनावारीको समयमा पेट दुख्ने, ऐठान हुने, वाकवाकी लाग्ने, मुड खराब हुने, अत्तालिने, घरीघरी भोक लाग्ने भएकाले राती सुत्ने बेलामा समस्या हुने गर्छ ।नेपाली समाजमा के पनि भनाई छ भने :
(सुत्ने कोठामा टेलिभिजन, कम्प्युटर, मोबाइल आदि नराख्नुहोस् ।
विशेषगरी लामो समयसम्म प्रयोग गरिरहनुपर्ने एपहरुले धेरै अगाडि नै डार्क मोड फिचर अपनाइसकेका थिए जस्तै भिडियो एडिटर , एडोब र ट्वीटरले २०१६ देखि नै डार्क मोड अपनाएको हो । केही समय अगाडि मात्र लोकप्रिय सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राम र युट्युबमा समेत यो फिचर जारी गरिएको छ । (विभिन्न एजेन्सी र अंग्रेजी साईटको सहयोगमा )